Xujada Tirada - Xeerarka
Waa in aad diyaarin lambarada si, ka 1 si ay u 15. Afarta lambar ee ugu horeysay, ka 1 si ay u 4, waa in laga dalban on safka kowaad, soo socda 4 lambarada safka labaad iyo wixii la mid ah. Safka ugu dambeeya, midigta, waa in la dhigaa square madhan.
guuro sharci ah ka kooban yihiin bedeshashada square ah tiriyey la square madhan. Meelaha 2 ee la isku bedelay waa inay noqdaan kuwo deris ah (wareega tirooyinka waa in lagu dhejiyaa dhinaca bidix, midig, sare ama hoose ee wareegga madhan).
Nasiib wacan xalinta xujada!